Ny fitsangatsanganana an'i Kambodza , raha ny marina, dia ho anao ny iray amin'ireo fifaninanana mahafinaritra indrindra. Saingy mba tsy handraràna ny fahatsapana azy, dia ilaina ny mikarakara ny tratra an-trano maivana indrindra. Tena zava-dehibe ho an'ny mpizahatany mpizahantany ny manapa-kevitra hoe inona no akanjo entina mankany Kambodza. Raha ny zava-misy, ny toetrandro mipongy tropikaly any amin'ny vanim-potoana maina (Novambra ka hatramin'ny Aprily) sy ny vanim-potoan'ny orana (hatramin'ny volana May ka hatramin'ny Oktobra) dia samy hafa amin'ny antsika. Noho izany, ny zavatra ataonao ao an-trano alohan'ny hialana, dia mety tsy mety ho an'ny firenena.
Takelaka mendrika handehanana manerana ny firenena
Alohan'ny hanangonanao valizy, anontanio ny toetr'andro toy ny any Kambodza. Izany dia noho ny fahavaratra sy ny ririnina eto dia be kokoa sy mangatsiaka kokoa noho ny any amin'ny latitudes, hany ka ireo traikefa efa za-draharaha dia manoro hevitra ny hanomana fitsangatsanganana mandritra ity vanim-potoana ity. Raha tonga amin'ny vanim-potoanan'ny monsoon ny daty fahatongana, dia ilaina ny manamboatra izany amin'ny fomba hafa tanteraka. Ny tolo-kevitra lehibe indrindra amin'ny fisafidianana ny poketra dia:
Ilaina ny manolotra ny akanjo vita amin'ny fitaovana "atody": landy na seza voajanahary, satria any Kambodza dia tena mafana tokoa izany ary mitombo ny hatsembohana.
Ny safidy tsara indrindra dia ny akanjo manerana izao tontolo izao, izay azo akana amin'ny mandeha, amin'ny diany amin'ny bus, ary eo amoron-dranomasina . Amin'ny ankapobeny dia manolo-tena ny hanaisotra anao amin'ny jeans, shorts, T-shirts na T-shirt vitsivitsy, satroka avy amin'ny masoandro (cap, panama, satroka satroka) ary, mazava ho azy, ny kiraro sy ny akanjo, izay hiova matetika noho ny toetr'andro mafana. Any Kambodza, dia mivarotra lamba amam-bika izy ireo, izay mety hitondra fahasorenana maro, ka tsara kokoa ny maka anao miaraka amin'ireo lahatsoratra ireo. Ny zazavavy dia afaka manazava sarafana mazava aminy, ary raha mikasa ny hitsidika toeram-pisakafoanana sy toeram-pivarotana hafa ianao - tsy dia tsara loatra ny akanjo hariva.
Satria azo antoka fa hitsidika ny sisintanin'i Kambodza ianao, aza hadinonao ny vinaingitra vitsivitsy na kitapom-basy, mba tsy hividianana azy ireo eo amin'ny toerana: amin'ny fiakaran'ny hafanana sy ny fanetren-tena, mety tsy hanam-potoana handroso alohan'ny fitsidihana iray hafa any amoron-dranomasina izy ireo . Ilaina sy pareo, izay miaro ny hoditra amin'ny taratra manjelatra tsara, raha toa ka mikasa ny handany ny andro rehetra.
Raha mandeha ianao mandritra ny vanim-potoanan'ny orana, dia tsara ny mitondra sweatshirta miaraka amin'ny rantsantanana (afaka manaloka - mazava sy mafana), pataloha vita amin'ny ravin-drano sy ny orana. Ny jirtra dia mety amin'ny mandeha amin'ny lalaon'ny andro na rivotra.
Ny fitsidihana ny tempoly eo an-toerana (Angkor Wat, Ta Prom, Bayon , Wat Phnom , sns.), Ilaina ny manao kapa mena na kapa lava lava izay mandrakotra ny soroka. Ny lehilahy dia mila manolo ny kiraro misy pataloha, ny vehivavy matetika dia mandeha any amin'ny jirobe na ny akanjo farafaharatsiny mankany amin'ny halavan'ny lohalika. Ao amin'io trano fandraisam-bahiny io ihany, misy cafe na eny an-dalambe dia azo atao ny mivezivezy amin'ny lobolobo, lobaka sy kiraro: tsy azo inoana fa hitady fangatahana any an-toerana ianao.
Kiraro ilaina ho an'ny dia
Koa satria any Kambodza na dia ririnina aza ny mari-pana dia mijanona ho avo be, mba hahazoana fampiononana fara-tampony, maka kapa matevina (sandoka), sandals na kiraro maivana. Izy ireo dia mety amin'ny lalana eny an-dalambe, fa ho an'ny làlana any an-tany sy ny fitsangatsanganana mankany anaty ala, dia aleo manan-javatra amin'ny karazana tennis mihidy, mpitaingina orin-tsambo na orinasan'ny orinasa tsara iray, izay hahazoana antoka ny hafanana sy ny fivoahan'ny vovoka. Ireo kiraro ireo dia mahasoa amin'ny vanim-potoana mafana sy mangatsiaka. Any amin'ny toerana maloto sy tsy azo iainana dia azo atao tsara ny hahita kiraro na kiraro.
Ny moron-dranomasina matetika dia mitefoka amin'ny fingotra na ravina fingotra, mamela azy ireo mivoaka malalaka eo amin'ny sisin'ny surf. Raha manapa-kevitra ny hijery ny ala mikitrok'aretina ianao, dia ataovy izay hahamety tsara ny kirarony: ny tanimboly eto dia mety ho maivana sy marefo, ka raha tsy izany dia mety hitera-doza ianao hahazoana lozam-pifamoivoizana na fifindrana. Ho an'ny takariva hariva ao an-tanàna, azonao atao ny mametraka kiraro na kapa amin'ny kiraro: amin'ny tranga hafa, tsy dia ilaina loatra izy ireo.
Visa ho any Kambodza ho an'ny Rosiana
Ahoana ny fomba hanadiovana ny efitra fidiovana?
Ahoana no fomba hitondran'ny zaza mamafa?
Ahoana ny fametrahana toaka amin'ny ririnina ao amin'ny lakaly?
Ny atin'ny turkey dia tsara sy ratsy
Tea miaraka amin'ny kanelina ho fatiantoka
Fety fialantsasatra sy fomban'ny Slavoniana
Esterhazy ao an-trano - prescription
Ireo Adventures ny Fashion Italiana any Rosia
Hairstyle ho an'ny volo fohy ao amin'ny balala
Ny loka iHeartRadio Music dia nitondra olo-malaza maro
Ahoana no hanafoanana ny olona?
Volkin Street ao Pattaya
Ahoana no ahafahan'ny holatra any amin'ny firenena?